I-EIBOARD LED Recordable Smart Whiteboard iyisizukulwane sakamuva somkhiqizo wekilasi ledijithali le-multimedia, yakhelwe ngokukhethekile ukusiza ukufundisa okuhlakaniphile, ibhodi lokubhala lendabuko elididiyelwe kanye nobuchwepheshe bokuthintana obusebenzayo ukuze bakhe isixazululo esisha sekilasi elihlakaniphile. Ngomklamo wokubhala okungenazihibe kanye nendawo enkulu eyisicaba, yenza ukuthi okuqukethwe okungokwesiko kwebhodi elimhlophe kube nokuqukethwe ku-e futhi kulondolozwe kalula futhi kube lula. Osayizi abatholakalayo ngu-146 inch, 162 inch no-185 inch.
I-EIBOARD LED Recordable Smart Whiteboard ingumqondo omusha oklanyelwe isixazululo sekilasi elihlakaniphile, okuyinto ihlanganisa ibhodi elimhlophe lendabuko, ibhodi elisebenzisanayo nephaneli yokuthinta ukuze kwakhe isixazululo esisha.Ivumela okuqukethwe kokubhala kwebhodi elimnyama noma ibhodi elimhlophe ukuthi kube nokuqukethwe kwe-e futhi kugcinwe kalula futhi kube lula. Ngomklamo wokubhala okungenamthungo kanye nendawo enkulu eyisicaba, ivumela abasebenzisi abaningi ukuthi basebenze ngezindlela eziningi zokusebenza ngasikhathi sinye. Abasebenzisi bangabhala ngomunwe, ipeni, izimpawu kanyekanye.
Ngaphambi kokuthi sazi ibhodi elimhlophe eliqophayo le-LED elirekhodikayo, sicela ufunde imininingwane engezansi mayelana nokuthuthukiswa kwesixazululo sekilasi le-multimedia, uzokwazi ukuthi ivela kanjani i-smart whiteboard erekhodikayo ye-LED nokuthi kungani amagumbi okufundela eyidinga.
Isixazululo sakamuva sesizukulwane esisha sesi-5 se-multimedeia calssrooms:
Isixazululo se-5th Gen Ibhodi elimhlophe le-EIBOARD LED elirekhodiwe elihlakaniphile, okuyi esanda kuklanywa nge-real-in-one yangempela. Ixazulula wonke amaphuzu obuhlungu wezixazululo ezingenhla ze-4 futhi idlula izinguquko ezingenhla ze-4.
Kunezinguqulo ezingu-4 kusukela i-V1.0 yethulwa ngo-2018. I-V3.0 eyethulwe ngo-2020 idumile futhi ibalulekile. I-V4.0 ezayo inamandla kakhulu.
Ibhodi elimhlophe eliqophayo le-LED linayo yonke imisebenzi ye-Interactive Smart Board, Projection, School Chalkboard, LED Interactive Touch Displays, Nano board, Izipikha, Visualizer, Controller, Pen Tray, njll.
1) Ibhodi elimhlophe elirekhodwayo le-LED lingakwazi ukurekhoda amanothi okubhala ngesandla njengokuqukethwe kwe-e kumamodi okusebenza amaningi, futhi ayashesha ukulondoloza.
Noma yimuphi umkhiqizo wokusetshenziswa kwezemfundo kufanele ucabange ngawo wonke amaqembu emkhakheni wezemfundo. I-smart whiteboard erekhodikayo ye-LED iklanyelwe ukudlala indima ebalulekile kwezemfundo futhi ingamathuba amasha emakethe yesimanje yokufundisa ekilasini elihlakaniphile.
Izikole eziningi kungenzeka ukuthi sezizifakile izisombululo zebhodi le-multimedia digital emakilasini. Kodwa eziningi zazo ekuqaleni zazifakwe ngohlobo oluyisisekelo ukuze kongiwe izindleko, lonke uhlelo lwalungaphelele futhi lufanelekile, futhi izinga lokusetshenziswa kothisha lalingekho phezulu, okungase kumosheke. Ngaphezu kwalokho, kungenzeka ukuthi lezi zixhobo sezinesikhathi eside zifakiwe, eziningi zazo azisatholakali ukuze zisetshenziswe futhi zidinga ukulungiswa nokushintshwa. Kwamanye amagumbi okufundela, isistimu yebhodi yedijithali ye-multimedia kungenzeka ukuthi ayizange ifakwe, futhi idinga isisombululo esisha esibalulekile nesisebenzayo. Idizayini yebhodi elimhlophe eliqophayo le-LED lingaxazulula lezi zinkinga. Ingakhuphula ukongiwa kwezindleko zemfundo, ikhuphule izinga lokusetshenziswa kwezisetshenziswa ngothisha, futhi ikhulise inani lezinto zokufundisa ezixubile.
Isixazululo esisha esiyingqayizivele siyadingeka, ukuze uthole izinzuzo zokubhida kanye nokumaketha okulula. Umkhiqizi one-R&D eqinile namandla okukhiqiza adingeka kakhulu njengosekelo.
Kungakho ibhodi elimhlophe eliqophayo le-LED liyithuba elisha lemakethe yezemfundo.
Thina ithimba le-EIBAORD sizozama konke okusemandleni ukuze sisebenzele imakethe yezemfundo, sithuthukise ibhodi yethu emhlophe eqophayo eqophayo ye-LED, futhi siyimakethe ebaluleke kakhulu futhi isebenza kahle kakhulu.
Okwedlule: I-Smart Blackboard FC-185EB
Olandelayo: I-Smart Whiteboard FC-185EB
I-TV (Ongakukhetha) Ifomethi yesithombe:PAL/SECAM/NTSC (Ongakukhetha); Isitoreji sesiteshi esingu-200
I-Nano Smart Blackboard